Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu soo dhaweeyey Boosaaso[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu soo dhaweeyey Boosaaso[Sawirro]
BOOSAASO – Madaxeynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku jooga Puntland ayaa maanta soo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Madaxweyne Farmaajo iyo waftigiisa ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada,waxaana ku weheliyay Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Sidoo kale waxaa ku weheliyay Wasiiro iyo xildhibaano ka kala tirsan Golayaasha kala duwan ee Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Puntland.
Bulshada Boosaaso oo gacmaha ku sita calanka Soomaaliya iyo kan Puntland oo taagan hareeraha waddooyinka iyo mas’uuliyiin ka tirsan Puntland ayaa Madaxweyne Farmaajo iyo waftigiisa si heer sare ah ugu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso.
Madaxweyne Farmaajo ayaa kulamo la qaadan doona qeybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka magaalada Boosaaso mudada uu ku sugan yahay magaalada.
Waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka guud ee magaalada Boosaaso,iyadoona ay magaalada dhexmarayeen ciidamada amniga sugaya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sanadkan 2018 uu noqonayo sanadkii dib u heshisiinta shacabka Soomaaliyeed,safarkiisuna uu salka ku hayo nabadeynta iyo la tashiga shacabka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa inta uu safarkiisa ku jiray waxa uu dhagax-dhiggay wajiga labaad ee Waddo laami ah oo isku xiraysa Ceel-daahir iyo Ceerigaabo,halka uu deegaanka Kalabeyr ka dhigax dhigay waddo isku xiri doonta deegaankaas iyo degmada Beyla.
Madaxweynaha Soomaaliya oo kulamo la wadatashi ah la qaadanayay mas’uuliyiinta iyo odayaasha deegaanada uu socdaalka ku maray ayaa sheegay in Dowladda Federaalka ay si dhow ugala shaqeynayso dowlad goboleedka Puntland daadejinta adeegyada bulshada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya u qorsheysay deegaanadaas.
In badan oo ka mid ah masuuliyiinta ka soo jeeda deegannadan waxa ay markasta nagala hadlaan sidii adeegyada dowladda ee heer Federaal loogu dhammeystiri lahaa. Anaga oo kaa shaneyna Dowlad Goboleedka Puntland waxaan ka shaqeynaynaa arrinkaas.”
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweynaha Jamhuuriyada ayaa Puntland yimid maalintii Axadda ee 07 Janaayo, waxaana uu isla maalintii Isniinta furay garoonka diyaaradaha ee Gen. Maxamd Abshir Hamaan oo laga hirgeliyey caasimadda Puntland ee Garowe .Waxaana lagu wadaa in uu ka dhoofo maalinta Sabtida Madaxweyanaha Soomaaliya magaalada Bosaso.